XAQIIQDA: Musuq-maasuq hareeyay Hey’addihii Sharci-dejinta Somalia – Warfaafiye:
XAQIIQDA: Musuq-maasuq hareeyay Hey’addihii Sharci-dejinta Somalia
Ali Mohyadin Jan 15, 2018 0
Guddiga Xeer-hoosaadka, waxaa Guddoomiye u ah Xildh. Mohamed Moalim Yaxye oo ah mudane ay isku heyb yihiin Mudane Jawari ayaa muddo sannad ah hagranaayay in dib u eegis lagu sameeyo xeer-hoosaadka saldhiga u ah howlaha Baarlamaanka, sabbao la xiriira danaysi shaqsi ah. Mohamed Macalin Yahye, wuxuu muddadaas si aan leex-leexad ah lahayn u raajicinaayay in uu helo xil-wasiirnimo oo kafiil ka yahay Mudane Jawaari. Hagrashadu waxay abuurtay inuu hakado dib u eeggista Xeer-hoosaadka, iyadoo xaqiiq dhab ah tahay Xildhibaan Mohamed Macalin, iska-ilaalinaayay inay isku dhacaan isaga iyo Jawaari. Waxaa caddeemo loo haaya inay isku milan yihiin labadii awoodood ee dastuuriga ah, Xukuumadda iyo Baarlamaanka oo aan jirin xeer u kala sooca mas’uuliyadda iyo xeerar isla-xisaabtan ah.
Xulushada xubnaha ka mid noqonaaya guddiyada joogtada ee baarlamaaniga ah ayaa ah kuwo aan ku saleysanayn maaba’diida nidaamaka Golaha iyo xeerarka saldhigga u ah shaqada sharci-dejinta. Guddiyada waxaa xubno ka ah xildhibaanno aan waayo arag ahayn, laguna soo soocday hab aan wafaqsanayn himilada iyo nidaamka sharci-dejinta. Xubnaha qaarkoodna waxaa loo tixgeliyaa shuruudo ku saabsan inay yihiin kuwo cusub oo aan aqoon u lahayn howlaha guddiga ee xubnaha ka yihiin ama guddoomiyaha looga dhigay. Arrimha guddiyada qaarkood waxay baarlamaanka u soo hooyaan sumcad xumo iyo in la waayo fursado hufan ee la xiriira xil-gudashada xubnaha guddiyada
Qormadaan waxay gaar u tahay Warfaafiye, hadaad daabaceyso ilaali xuquuqda Website-ka Warfaafiye